« Raharaha Mbola Rajaonah »: mitondra fanamarihana ny Bianco | NewsMada
« Raharaha Mbola Rajaonah »: mitondra fanamarihana ny Bianco
«Tsy misy izany “Vondron’ny mpiara-miasa amin’ny BIANCO” izany eto anivon’ny BIANCO ary ny fanambaràna izay miely sy naely dia nataon’ olon-kafa izay nanoratra izany tamin’ny anaran’ny tenany manokana ». Izany no anisan’ny voarakitra ao anatin’ny fampitam-baovao sy fanamarihana nataon’ny Birao mahaleo tena iadiana amin’ny kolikoly, omaly, mikasika ny « raharaha Mbola Rajaonah », hita miparitaka amin’ny tambajotran-tserasera facebook tato ho ato.
Ambaran’ilay fanamarihana àry fa « manana ny soatoavina manokana iainany sy mifehy azy ny mpiasan’ny BIANCO ary mandàla izany ho foto-pisainana entina miatrika ny asa aman’andraikiny ». Lohalaharana amin’izany, hoy ny Bianco ny «tsy fandeferana ny trangana kolikoly amin’ny endriny rehetra, ny tsy fitanilàna, ny fahaleovan-tena sy ny fitandroana hatrany hatrany ny fahamarinana ».
Ny Bianco, mbola manamafy indray ao anatin’ity fampitam-baovao ity fa «tsy misy olona ambonin’ny lalàna na iza na iza ary na avy aiza na avy aiza ». Manentana ny rehetra izy ireo, araka izany, tsy ho voarebirebin’ny mpanely tsaho entina manakona ny ratsy atao sy hiarovana tena.